बुजुर्गका लागि स्वत: उत्तर फोन विकल्पहरू - Konnenkt
स्वत: उत्तर भिडियो फोन
ओटो उत्तर फोन विकल्प
तपाईको बुढा बुढाका अभिभावकलाई अनुत्तरित कलले तपाईलाई चिन्ता गराउन सक्छ। तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि तिनीहरू बिरामी छन् वा केही खराब भएको छ। यो अत्यन्त कष्टकर हुन सक्छ! २-मार्ग भिडियोको साथ एक स्वत: उत्तर फोन मद्दत गर्न सक्दछ।
कसरी पढ्नुहोस् स्वत: जवाफले जुडीको जीवन बचाउन मद्दत गर्‍यो.
हामी तपाईंको सेटअप गर्न सक्छौं Konnekt भिडियोफोनले आगमन कलहरू स्वचालित रूपमा जवाफ दिन, यदि तिनीहरू समयमै भिडिओफोनमा पुग्दैनन्, केवल तपाईंले नामांकन गर्नुभएको अधिकृत कलरहरूबाट। तपाईं स्वत: जवाफ दिनको लागी कति समय छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईलाई पुन: आश्वस्त हुन सक्छ - चाहे उनीहरूले जवाफ दिन धेरै लामो समय लिएको छ, यदि उनीहरू चलचित्रको बखत निद्रामा परेका छन, यदि तिनीहरूसँग आफ्नो काखमा बिरालो छ, यदि तिनीहरू बेलुकाको खानामा व्यस्त छन् वा यदि तिनीहरू भित्र छन् भने। अर्को कोठा।
बच्चा वा हेरचाह गर्नेले गर्न सक्दछ जाँच चाहे तिनीहरू ठीक छन् वा सहयोग चाहिन्छ।
जब भिडिओफोन स्वतः जवाफ, तपाईं एक अर्को अर्को देखी र कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
यो चर्को छ, र तिनीहरूको आवाज लिन्छ जरी तिनीहरू नजिकको कोठामा छन् तर उठ्न सक्दैनन्।
उनीहरूले देख्न सक्दछन् कि कसले बोलाइरहेको छ - वेबक्याम विपरीत - तपाईलाई विश्वस्त गराउन सकिन्छ कि यो तपाईले नामांकन गर्नुभएको सम्पर्क हो।
तपाईको आपतकालिन योजना के हो?
हामी भिडियोफोन सेट मात्र गर्छौं विश्वास-जवाफ ती विश्वासिला सम्पर्कहरू जुन नामांकन गरिएको छ। अन्य समाधानहरूको विपरित, अन्य सम्पर्कहरू स्वत: उत्तर दिइएन।
स्वत: उत्तर वैकल्पिक हो र यदि सिफारिश गरिएको छैन यदि भिडियोफोन बेडरूममा छ भने।
हेरचाह प्रदायक र परिवारका लागि, Konnektको अनुकूलित स्वत: जवाफ भिडियो फोन सुविधा ईश्वरताका हो।
उत्तरहरूले 50 सेकेन्ड पछि सम्पर्कहरू छान्छन्
विश्वसनीय प्रियजनहरूले जाँच गर्न सक्छन् तिनीहरू ठीक छन्
चिन्ता कम गर्नुहोस्, यदि तिनीहरू उठ्न सक्दैनन्
दुई-तस्विरले कसलाई कल गरिरहेको छ भनेर आश्वासन दिन्छ
LOUD: नजिक कोठामा कल गर्नुहोस्, र सुन्नुहोस्
यसले डिमेंशिया, अल्जाइमर, मस्तिष्कमा चोटपटक, सिक्ने कठिनाई वा विगतको स्ट्रोकका मानिसहरूलाई कसरी मद्दत गर्दछ?
यो Konnekt भिडिओफोन एकदम सरल छ - एक फोन वा टिभी भन्दा सजिलो - एक टच कल बटनको साथ। यसले नामहरू, अनुहारहरू र आवाजहरू बीचको लिंकलाई सुदृढ गर्दछ। याद गर्न कुनै नम्बरहरू छैनन्, कुनै किबोर्ड वा माउस छैन, कुनै लगइनहरू वा पासवर्ड छैन, कुनै ह्यान्डसेट छैन। कुनै पनि कम्प्युटर कौशल आवश्यक छैन, जे भए पनि। यसले चलाखीसाथ भ्वाइसमेल हटाउन सक्छ, यसले टेलिमार्किटरहरू र जालसाजीहरूलाई रोक्दछ, र मनोनीत देखभाल गर्नेहरूलाई स्वत: जवाफ दिन सकिन्छ। हामी सेटअप, अनुकूलन, विश्वव्यापी वितरण र समर्थन गर्छौं। हामी विशेष स्थापना (जस्तै बेड-माउन्ट कोष्ठक) र इन्टरनेटको साथ मद्दत गर्न सक्दछौं। जब यो आइपुग्छ, त्यहाँ कुनै सेटअप छैन! केवल यसलाई अनबक्स गर्नुहोस्, किकस्ट्यान्डलाई अनफोल्ड गर्नुहोस्, यसलाई टेबलमा टाँसिनुहोस्, र पावर आउटलेटमा प्लग गर्नुहोस्। भ्रमण गर्नुहोस् Dementia अनुप्रयोगहरू, वा हाम्रो हेर्नुहोस् Konnekt अक्षमता भिडियोफोन विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको (र अतिरिक्त सुविधाहरूको साथ) उनीहरूको लागि संज्ञानात्मक कमजोरीको साथ।